လုံ့လလဲထူ ဉာဏျလဲကူ နောကျခြေးလဲခြ နတျလညျးမ
HomeKnowledgeလုံ့လလဲထူ ဉာဏျလဲကူ နောကျခြေးလဲခြ နတျလညျးမ
တဈခါတုနျးက မောငျတငျနဲ့ မယျခငျ ဆိုတဲ့ သူဆငျးရဲ ဇနီးမောငျနှံတို့ဟာ ရှာစှနျက တဲလေးမှာ နပွေီး လယျကှကျလေး တဈကှကျကို ပိုငျဆိုငျကွ သတဲ့ ။ သူတို့ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ လယျမွကေ ရရှိတဲ့ စပါးသီးနှံနဲ့ မလောကျမင ဖွဈပွီး လငျမယားနှဈယောကျ ကွပျတညျးနေ ကွတာပေါ့ ။
တနမှေ့ာတော့ မောငျတငျက အကွံတခု ရလိုကျတယျ။
" လူမစှမျးရငျ နတျမ သတဲ့ဟ.. ရှငျမရေ.. မနကျဖွနျ ငါတို့ လယျကှကျထိပျက သရကျပငျကွီးမှာ စားဖှယျသောကျဖှယျနဲ့ သှားပွီး ခမျြးသာအောငျ တောငျးပနျကွစို့.. "
နောကျတနမှေ့ာတော့ သရကျပငျစောငျ့ ရုက်ခစိုးကွီးဟာ သူ့အပငျအောကျလာပွီး မစဖို့ ဆုတောငျးနတေဲ့ သူဆငျးရဲလငျမယားကို တှလေို့ကျရတယျ..
" အငျး.. ငါတော့ ဒုက်ခပါပဲ.. ရှေးကုသိုလျ မပါရငျ ဘယျလိုမှ ထောကျပံ့လို့ မရဘူး ဆိုတာ ဒငျးတို့တှေ မသိကွဘူး. ရှေးကုသိုလျ ပါတာတောငျ ခုလကျရှိမှာ လုံ့လ ဝီရိယ မရှိသူ ၊ ဉာဏျပညာ ခြို့တဲ့သူကို ကူညီမစဖို့ အငျမတနျ ခကျတယျ.. အငျးလေ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈ စောငျ့ကွညျ့ရ မှာပဲ.. "
ဒီလိုနဲ့ တနမှေ့ာ မယျခငျဟာ ဆှမျးခံလာတဲ့ ဘုနျးကွီးတပါးကို ဆှမျးလောငျးလိုကျတာ တှရေ့တယျ ။
" ဟုတျပွီ.. ဒငျးတို့ကို မ စဖို့ရာ အခှငျ့အရေးတော့ ရလာပွီ.. "
ရုက်ခစိုးကွီးဟာ မယျခငျ ဟငျးရှကျ ခူးသှားတဲ့လမျးမှာ ရှစေတခြို့ ခထြား လိုကျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မယျခငျက ဟငျးရှကျ ရှာဖှရေငျး အပျေါကို မျောကွညျ့ သှားတဲ့ အတှကျ မမွငျဘူးတဲ့ကှယျ ။ ဒါနဲ့ အတျော ကွာလာတဲ့ တနမှေ့ာ မောငျတငျက သူတောငျးစား တယောကျကို ဆနျနညျးနညျးပေးတာကို ရုက်ခစိုးကွီး တှရေ့တယျ ။
" ဟုတျပွီ.. ဒီတခါတော့ လမျးမှာ ခထြားပွီး ပေးလို့ မဖွဈဘူး.. သဈပငျမှာ ခြိတျဆှဲပွရငျတော့ မွငျမှာပဲ.. "
အဲဒီနေ့ မှာတော့ မယျခငျဟာ တောထဲကို သှားပမေယျ့ အသှားရော ၊ အပွနျမှာပါ အပျေါကို မော့မကွညျ့မိပဲ လမျးကိုသာ ကွညျ့သှားနေ သတဲ့ ။ အဲသညျနှဈမှာ မိုးလဝေသကလညျး မကောငျးတော့ သူဆငျးရဲ လငျမယားဟာ ဆနျစပါးလညျး အရငျကလောကျ မရကွဘူးတဲ့ ။
" မိနျးမရယျ.. ငါတို့ အရိုအသေ ပေးကွတဲ့ သဈပငျက ရုက်ခစိုးကွီးက တနျခိုးမကွီးဘူးလား မသိဘူးနျော ငါတို့ကိုလညျး မ မစပါလားကှာ.. "
အဲဒီညမှာပဲ လငျမယားနှဈယောကျလုံးကို ရုက်ခစိုးကွီးက အိပျမကျ ပေးသတဲ့ ။
" အမောငျ ဆငျးရဲသား.. ကုသိုလျကောငျးမှု မရှိတဲ့သူ ၊ ထကွှ လုံ့လ မရှိတဲ့ ပငျြးရိသူ ၊ အသိဉာဏျ နုံနဲ့သူတို့ကို ငါတို့ နတျမြားက ကူညီမစလို့ မရပါဘူး.. ဒီတော့ နောကျတနှဈကရြငျ အသငျ့ရဲ့ လယျကို မွဆေီသွဇာ ကောငျးမှနျအောငျ နောကျခြေး ( နှားခြီး ) လဲခပြါ.. တမနျးညကျအောငျလဲ ထှနျပွီး စိုကျပါ၊ ငါလဲ ကူညီ မစ ပါ့မယျ.. "
သူဆငျးရဲ လငျမယားဟာ ရုက်ခစိုးကွီး ပွောတဲ့အတိုငျး ကွိုးစားပွီး လုပျကိုငျ ကွတဲ့အခါ မကွာခငျပဲ ခမျြးသာသှားကွသတဲ့.. ။
လုံ့လမထူ ဉာဏျမကူဘဲ ၊ အယူ တစောငျး ကံတကွောငျးမြှ ၊ မကောငျးလညျး ကံ ကောငျးလညျး ကံ ဟု ကံကိုခညျြးသား မကိုးရာဘူး ။ ပညာဉာဏျဖွငျ့ ၊ သငျ့ မသငျ့ကို အခှငျ့ရှု၍ ၊ အပွုလုံ့လ ရှိအပျစှတညျ့ ။ (မဃဒဝေ)
လုံ့လလဲထူ ဥာဏ်လဲကူ နောက်ချေးလဲချ နတ်လည်းမ
တစ်ခါတုန်းက မောင်တင်နဲ့ မယ်ခင် ဆိုတဲ့ သူဆင်းရဲ ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာ ရွာစွန်က တဲလေးမှာ နေပြီး လယ်ကွက်လေး တစ်ကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြ သတဲ့ ။ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လယ်မြေက ရရှိတဲ့ စပါးသီးနှံနဲ့ မလောက်မင ဖြစ်ပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ကြပ်တည်းနေ ကြတာပေါ့ ။
တနေ့မှာတော့ မောင်တင်က အကြံတခု ရလိုက်တယ် ။
" လူမစွမ်းရင် နတ်မ သတဲ့ဟ.. ရှင်မရေ.. မနက်ဖြန် ငါတို့ လယ်ကွက်ထိပ်က သရက်ပင်ကြီးမှာ စားဖွယ်သောက်ဖွယ်နဲ့ သွားပြီး ချမ်းသာအောင် တောင်းပန်ကြစို့.. "
နောက်တနေ့မှာတော့ သရက်ပင်စောင့် ရုက္ခစိုးကြီးဟာ သူ့အပင်အောက်လာပြီး မစဖို့ ဆုတောင်းနေတဲ့ သူဆင်းရဲလင်မယားကို တွေ့လိုက်ရတယ်..
" အင်း.. ငါတော့ ဒုက္ခပါပဲ.. ရှေးကုသိုလ် မပါရင် ဘယ်လိုမှ ထောက်ပံ့လို့ မရဘူး ဆိုတာ ဒင်းတို့တွေ မသိကြဘူး. ရှေးကုသိုလ် ပါတာတောင် ခုလက်ရှိမှာ လုံ့လ ဝီရိယ မရှိသူ ၊ ဉာဏ်ပညာ ချို့တဲ့သူကို ကူညီမစဖို့ အင်မတန် ခက်တယ်.. အင်းလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်ကြည့်ရ မှာပဲ.. "
ဒီလိုနဲ့ တနေ့မှာ မယ်ခင်ဟာ ဆွမ်းခံလာတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးကို ဆွမ်းလောင်းလိုက်တာ တွေ့ရတယ် ။
" ဟုတ်ပြီ.. ဒင်းတို့ကို မ စဖို့ရာ အခွင့်အရေးတော့ ရလာပြီ.. "
ရုက္ခစိုးကြီးဟာ မယ်ခင် ဟင်းရွက် ခူးသွားတဲ့လမ်းမှာ ရွှေစတချို့ ချထား လိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် မယ်ခင်က ဟင်းရွက် ရှာဖွေရင်း အပေါ်ကို မော်ကြည့် သွားတဲ့ အတွက် မမြင်ဘူးတဲ့ကွယ် ။ ဒါနဲ့ အတော် ကြာလာတဲ့ တနေ့မှာ မောင်တင်က သူတောင်းစား တယောက်ကို ဆန်နည်းနည်းပေးတာကို ရုက္ခစိုးကြီး တွေ့ရတယ် ။
" ဟုတ်ပြီ.. ဒီတခါတော့ လမ်းမှာ ချထားပြီး ပေးလို့ မဖြစ်ဘူး.. သစ်ပင်မှာ ချိတ်ဆွဲပြရင်တော့ မြင်မှာပဲ.. "
အဲဒီနေ့ မှာတော့ မယ်ခင်ဟာ တောထဲကို သွားပေမယ့် အသွားရော ၊ အပြန်မှာပါ အပေါ်ကို မော့မကြည့်မိပဲ လမ်းကိုသာ ကြည့်သွားနေ သတဲ့ ။ အဲသည်နှစ်မှာ မိုးလေဝသကလည်း မကောင်းတော့ သူဆင်းရဲ လင်မယားဟာ ဆန်စပါးလည်း အရင်ကလောက် မရကြဘူးတဲ့ ။
" မိန်းမရယ်.. ငါတို့ အရိုအသေ ပေးကြတဲ့ သစ်ပင်က ရုက္ခစိုးကြီးက တန်ခိုးမကြီးဘူးလား မသိဘူးနော် ငါတို့ကိုလည်း မ မစပါလားကွာ.. "
အဲဒီညမှာပဲ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကို ရုက္ခစိုးကြီးက အိပ်မက် ပေးသတဲ့ ။
" အမောင် ဆင်းရဲသား.. ကုသိုလ်ကောင်းမှု မရှိတဲ့သူ ၊ ထကြွ လုံ့လ မရှိတဲ့ ပျင်းရိသူ ၊ အသိဉာဏ် နုံနဲ့သူတို့ကို ငါတို့ နတ်များက ကူညီမစလို့ မရပါဘူး.. ဒီတော့ နောက်တနှစ်ကျရင် အသင့်ရဲ့ လယ်ကို မြေဆီသြဇာ ကောင်းမွန်အောင် နောက်ချေး ( နွားချီး ) လဲချပါ.. တမန်းညက်အောင်လဲ ထွန်ပြီး စိုက်ပါ၊ ငါလဲ ကူညီ မစ ပါ့မယ်.. "
သူဆင်းရဲ လင်မယားဟာ ရုက္ခစိုးကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း ကြိုးစားပြီး လုပ်ကိုင် ကြတဲ့အခါ မကြာခင်ပဲ ချမ်းသာသွားကြသတဲ့.. ။
လုံ့လမထူ ဉာဏ်မကူဘဲ ၊ အယူ တစောင်း ကံတကြောင်းမျှ ၊ မကောင်းလည်း ကံ ကောင်းလည်း ကံ ဟု ကံကိုချည်းသား မကိုးရာဘူး ။ ပညာဉာဏ်ဖြင့် ၊ သင့် မသင့်ကို အခွင့်ရှု၍ ၊ အပြုလုံ့လ ရှိအပ်စွတည့် ။ (မဃဒေဝ)